Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. सरकारी अस्पतालमा बिरामीको व्यापार, यसरी पठाइन्छ नीजि क्लिनिकमा (भिडियोसहित) – Emountain TV
सरकारी अस्पतालमा बिरामीको व्यापार, यसरी पठाइन्छ नीजि क्लिनिकमा (भिडियोसहित)
विराटनगर, २५ जेठ । मोरङ जिल्लाको विराटनगरमा रहेकोे कोशी अस्पतालको सेवा प्रवाहबाट अधिकांश सेवाग्राहीले सास्ती पाएका छन् । अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरु अस्पतालमा भन्दा धेरै निजी क्लिनिकमा हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । अस्पतालमा डाक्टर नभेटिदा सेवाग्राही महंगो रकम तिरेर निजी क्लिनिकमा जान बाध्य छन् ।
विराटनगरको कोशी अस्पतालमा दैनिक एक हजार भन्दा बढी सेवाग्राहीहरु सेवा लिनका लागि आउने गरेका छन् । तर विरामीको अनुपातमा डाक्टरको संख्या कम हुँदा र भएका डाक्टरहरुले पनि अस्पतालमा प्रयाप्त समय नदिँदा पुर्वी नेपालको सबैभन्दा ठुलो सरकारी अस्पतालबाट अहिले सेवाग्राही समयमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । डाक्टर नभेटिदा सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न आएका सेवाग्राहीहरु निजी क्लिीनिकतिर धाउने गरेका छन् ।
अस्पतालमा भन्दा निजी क्लिनिकमा धेरै समय बिताउने डाक्टरहरुले आफ्ना सहयोगी लगाएर बिरामीलाई निजी क्लिनिकमा लैजाने गरेका छन् । अस्पतालमा विरामीलाई समय नदिने डाक्टरले निजी क्लिनिक आउनुहोस्, उत्तै राम्रोसंग हेरौंला भन्दै विरामीलाई निजी क्लिनिकमा तान्ने गर्दछन् । अस्पतालमा सेवा लिन आएका विरामीलाई निजी क्लिनिकमा लैजान डाक्टरका.सहयोगीले नै एम्बुलेन्स खोजीदिन्छन् र विरामी निजि क्लिनिक लैजान्छन्।
डाक्टरहरु सरकारी अस्पतालमा विरामी हेर्ने भन्दा पनि हाजिरका लागि मात्र आउने गरेको विरामीहरुको गुनासो छ । डाक्टरहरुले विरामीलाई अभ्यासमा आएका सिकारु डाक्टरको भरमा छोड्ने गरेका छन् । अस्पतालमा आएको एक हप्ता हुँदा पनि कुनै राम्रो उपचार हुन नसकेको र सबै सिकारु डाक्टर रहेको सेवाग्राही गुनासो गर्दछन् । तर कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेट डाक्टर रोशन पोखरेल सर्वसाधारणको गुनासो मान्न तयार देखिंदैन्न ।
कोशी अस्पतालमा हाल कार्यरत ६५ जना चिकित्सक छन् । दैनिक एक हजार भन्दा धेरै विरामी आउने गरेको अस्पतालकै रेकर्ड रहेको छ । यसरी हेर्दा एक डाक्टरले १ मिनेटमा झण्डै २ जना बिरामी जाँच्नु पर्ने हुन्छ । तर डाक्टरहरुले प्रयाप्त समय दिने गरेका छैनन् ।
यसले गर्दा विरामीहरु बाध्यताले पनि निजि क्लिनिक जानुपर्ने अवस्था छ । एउटै विरामी सामान्य चेकजाँचमा पनि ५ सयदेखि हजारसम्म टिकट शुल्क लिने डाक्टरले सरकारी अस्पताललाई देखाउने दाँत बनाएर निजि क्लिनिकलाई कमाई खाने धन्दा बनाएका छन् ।
अझै नियन्त्रणमा आएन डेंगु : पूर्वीतराईमा ७६९ बिरामी